व्यवसायिक रेजिस्टरहरूमा इलेक्ट्रोनिक फाइलिंगमा ऐन ...
व्यावसायिक रेजिष्टरहरूमा इलेक्ट्रोनिक फाइलिंगमा ऐनः सरकार कसरी समयको साथ सर्छ
नेदरल्याण्ड्समा ब्यापार भएका अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सहयोग गर्नु मेरो दैनिक अभ्यासको एक हिस्सा हो। हुन पनि, नेदरल्याण्ड्स एउटा व्यवसायको संचालन गर्न एक महान देश हो, तर भाषा सिक्ने वा डच व्यवसाय अभ्यासमा बानी हुनु कहिलेकाँही विदेशी कर्पोरेसनहरूको लागि जटिल हुन सक्छ। तसर्थ, सहयोगी हात अक्सर सराहना गरिन्छ। मेरो सहयोगको दायरा जटिल कार्यहरूमा सहयोग पुर्‍याउनदेखि लिएर डच अधिकारीहरूसँग सञ्चारमा मद्दत सम्म छ। हालसालै, मलाई ग्राहकले डच चेम्बर अफ कमर्सको एक पत्रमा ठीक के भनिएको थियो भनेर वर्णन गर्न एक प्रश्न आएको थियो। यो सरल, यद्यपि महत्वपूर्ण र सूचनामूलक पत्रले वित्तीय बयानहरू फाइल गर्ने कार्यमा एक नवीनतालाई चिन्ता गर्‍यो, जुन चाँडै मात्र विद्युतीय रूपमा सम्भव हुनेछ। सरकारले समयको साथ कदम चाल्ने, इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्जका फाइदाहरुको उपयोग गर्न र यस बर्षे पुनरावर्ती प्रक्रियालाई सम्हाल्ने एक मानकीकृत तरीकाको परिचय दिन सरकारको चाहनाको परिणाम हो। यसैले वित्तीय विवरणहरू आर्थिक वर्ष २०१ or वा २०१ 2016 बाट इलेक्ट्रोनिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ, जसै हेंडेलरेजिस्टरहरू लैंग्स एलेक्ट्रोनिस्च वेग (वाणिज्य रेजिस्टरहरूमा इलेक्ट्रोनिक दाखिल गर्ने अधिनियम) मा ओतप्रोत छन्, जसलाई बेसलुइट इलेक्ट्रोनिसिससँगै पेश गरिएको थियो। deponering Handelsregister (वाणिज्य रेजिष्टरमा इलेक्ट्रोनिक फाइलिंगमा रिजोलुसन); पछि अतिरिक्त, विस्तृत नियमहरू प्रदान गर्दै। एकदमै मुखवाचक, तर वास्तवमा यो ऐन र रिजोलुसनले के लगाउँछ?
त्यसपछि र अब
पहिले, वित्तीय विवरणहरू दुवै इलेक्ट्रोनिक र कागजमा चेम्बर अफ कमर्समा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो। डच सिभिल कोड अझै पनि ठूलो मात्रामा कागजमा निक्षेपको आधारमा प्रावधानहरू जान्दछ। वर्तमानमा, यो विधिलाई पुरानो भएको जस्तो देख्न सकिन्छ र म वास्तवमै थोरै आश्चर्यचकित भएको थिए कि यो विकास पहिले देखिएको छैन। यो सोच्न गाह्रो छैन कि कागजमा वित्तीय विवरणहरू फाइल गर्नुमा यसका कागजातहरूको इलेक्ट्रोनिक फाइलिंगको तुलनामा धेरै बेफाइदाहरू छन् जब लागत र समयको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा। कागजमा लाग्ने लागतहरू र वार्षिक विवरणहरू कागजमा राख्नु पर्ने लागत र समयको बारेमा सोच्नुहोस् - कागजमा पनि - वाणिज्य चेम्बरमा पेश गर्नुहोस्, जसले त्यसपछि यी लिखित कागजातहरू प्रशोधन गर्नुपर्दछ, समय र लागत उल्लेख नभए पनि जब एक लेखाकार ड्राफ्ट दिनुहोस् वा यी (गैर मानक) वित्तीय कथनहरू प्रमाणित गर्न। त्यसकारण, सरकारले "एसबीआर" (छोटोका लागि: मानक व्यापार प्रतिवेदन) को उपयोग गर्न प्रस्ताव गर्‍यो, जुन डाटाको एक क्याटलग (डच ट्याक्सोनोमी) को आधारमा वित्तीय सूचना र कागजातहरू सिर्जना गर्ने र पेश गर्ने एक मानक इलेक्ट्रोनिकल विधि हो। यस क्याटलगले डेटाको परिभाषा समावेश गर्दछ, जुन वित्तीय विवरणहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एसबीआर-विधिको अर्को लाभ यो हो कि निगम र वाणिज्य वाणिज्य संघ बीच डाटा लगत मात्र सरल हुनेछ, तर मानकीकरणको परिणाम स्वरूप, तेस्रो पक्षहरूसँग डाटाको आदानप्रदान पनि सजिलो हुनेछ। साना निगमहरूले २०० 2007 देखि एसबीआर-विधि प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोनिक रूपमा वार्षिक विवरणहरू सबमिट गर्न सक्दछन्। मध्यम आकार र ठूला व्यवसायका लागि यो सम्भावना २०१ 2015 मा पेश भएको छ।
त्यसोभए, कहिले र कसको लागि?
सरकारले स्पष्ट गर्‍यो कि यस प्रश्नको उत्तर "आकारको मामला" को एक विशिष्ट मामला हो। साना व्यवसायहरूले आर्थिक बर्ष २०१ 2016 देखि एसबीआर मार्फत इलेक्ट्रोनिक रूपमा वित्तीय विवरणहरू पेश गर्न बाध्य हुनेछन्। वैकल्पिक रूपमा, साना व्यवसायहरू जुन (ड्राफ्ट र) वित्तीय बयान आफैं पेश गर्छन्, एक नि: शुल्क अनलाइन सेवा मार्फत बयान जम्मा गर्ने सम्भावना छ - सेवा "zelf deponeren jarrekening" - जुन २०१ 2014 देखि सञ्चालनमा छ। यसको फाइदा सेवा भनेको यो हो कि एकले सफ्टवेयर किन्नु पर्दैन जुन "SBR उपयुक्त" छ। मध्यम आकारका व्यवसायहरूले वित्तीय बर्ष २०१ 2017 देखि एसबीआर मार्फत वित्तीय विवरणहरू पेश गर्न आवश्यक छ। साथै यी व्यवसायहरूको लागि एक अस्थायी, वैकल्पिक अनलाइन सेवा ("opstellen jaarrekening") लाई प्रस्तुत गरिनेछ। यस सेवाको माध्यमबाट मध्यम आकारका व्यवसायहरूले वित्तीय बयान आफै ड्राफ्ट गर्न सक्छन् XBRL- ढाँचामा। पछि यी बयानहरू एक अनलाइन पोर्टल ("Digipoort") मार्फत बुझाउन सकिन्छ। यसको मतलव यो हो कि निगमले तुरुन्तै "SBR- उपयुक्त" सफ्टवेयर किन्नु पर्दैन। यो सेवा अस्थायी हुनेछ र years बर्ष पछि कब्जा हुनेछ, २०१ 2017 बाट गणना गरीरहेको छ। एसबीआर मार्फत वित्तीय बयान दायर गर्न ठूला व्यवसाय र मध्यम आकारका समूह संरचनाहरूको बाध्यता छैन। यो किनभने यी व्यवसायहरूले आवश्यकताको एक धेरै जटिल सेटसँग सम्झौता गर्नुपर्दछ। अपेक्षा यो हो कि यी व्यवसायहरूलाई एसआरआर मार्फत फाइल गर्ने वा २०१ European पछि एक विशिष्ट यूरोपीय ढाँचा मार्फत फाइल गर्ने बीच छनौट गर्ने अवसर हुनेछ।
कुनै अपवाद बिना कुनै नियम छैन
एक नियम एक नियम हुँदैन यदि त्यहाँ अपवाद बनाइनु पर्ने थिएन। दुई, सटीक हुन। वित्तीय बयान फाइल गर्ने सम्बन्धमा नयाँ नियम कानूनी संस्था र नेदरल्याण्ड बाहिर एक दर्ता कार्यालय संग कम्पनीहरु को लागी लागू हुँदैन, कि, Handelsregisterbesluit २०० 2008 (वाणिज्य रजिष्टर रेजोलुसन २०० 2008) को आधारमा, वित्तीय कागजात फाइल गर्ने दायित्व छ वाणिज्य च्याम्बरमा, जहाँसम्म र फारममा यी कागजातहरू दर्ता गरिएको कार्यालयको देशमा खुलासा गरिनु पर्छ। दोस्रो अपवाद जारीकर्ताहरूको लागि बनाइएको छ: Wft (वित्तीय पर्यवेक्षण ऐन) को लेख १: १ मा परिभाषित गरे अनुसार र जारीकर्ताको सहायक कम्पनीहरू, यदि ती आफै जारीकर्ता हुन् भने। जारीकर्ता कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति हो जुन धितो जारी गर्न चाहन्छ वा धितो जारी गर्न चाहन्छ।
ध्यानका अन्य बुँदाहरू
अझै, त्यो सबै छैन। कानूनी संस्थाहरूले आफैंमा महत्त्वका केही थप पक्षहरूको पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। यी पक्षहरू मध्ये एक तथ्य यो हो कि कानुनी निकाय कानून बमोजिम छन् कि वित्तीय बयान दायरको लागि जिम्मेवार रहनेछ। अन्य मध्ये, यसको मतलब यो हो कि वित्तीय बयानले त्यस्तो अन्तरदृष्टि सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ कि एकले कानुनी संस्थाको वित्तीय स्थितिको पर्याप्त मूल्यांकन गर्न सक्दछ। त्यसकारण म हरेक कम्पनीलाई वित्तीय बयानमा डाटा ध्यानपूर्वक जाँच गर्न सल्लाह दिन्छु उनीहरूको हरदम फाइल गर्नु अघि। अन्तिम तर कम्तिमा पनि यस तथ्यमा ध्यान दिनुहोस् कि निर्धारित तरिकामा बयान फाइल गर्न अस्वीकार गर्दा वेट अप डे इकॉनोमिचे डेलिस्टेन (आर्थिक अपराध कानून) को आधारमा अपराधिको गठन हुनेछ। बरु सुविधाजनक रूपमा, यो पुष्टि भयो कि एसबीआर-विधि मार्फत सिर्जना गरिएको वित्तीय कथनहरू शेयरधारकहरूको बैठकले यी कथनहरू स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। यी खाताहरू डच सिभिल कोडको लेख २:2393 with अनुसार लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षणको विषय पनि हुन सक्दछन्।
वाणिज्य रेजिस्टरहरू र यससँग सम्बन्धित रिजोलुसनमा इलेक्ट्रोनिक फाइलिंगमा ऐनको प्रावधानसँगै सरकारले प्रगतिशीलताको राम्रो अंश प्रदर्शित गरेको छ। नतिजाको रूपमा, सानो र मध्यम आकारका व्यवसायहरूका लागि २०१ statements र २०१ from को क्रमशः आर्थिक विवरणहरू इलेक्ट्रॉनिक रूपमा जम्मा गर्न अनिवार्य हुनेछ, जबसम्म कम्पनीले यी मध्ये कुनै एक अपवादको दायरा भित्र नपरोस्। फाइदाहरू असंख्य छन्। अझै पनि, म सबै कम्पनीहरूलाई सल्लाह दिन्छु कि उनीहरूले आफ्नो बुद्धिमत्ता राख्नु पर्छ किनभने अन्तिम दायित्व अझै पनि बाध्यताका साथ फाइल कम्पनीहरूमा आफैमा निर्भर गर्दछ र कम्पनी निर्देशकको रूपमा, तपाईं निश्चित रूपमा परिणामहरूसँग व्यवहार गर्न छोड्नुहुन्न।
यो लेख पढेपछि तपाईसँग केहि प्रश्न वा टिप्पणीहरू छन्, श्रीमानलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। म्याक्सिम Hodak, वकील मा at- कानून Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl वा mr मार्फत। टम मेभिस, वकील-मा-कानून Law & More tom.meevis@lawandmore.nl मार्फत वा हामीलाई कल गर्नुहोस् +१) (०) -31०-0 40 ०3690680०।
अर्को यातायात कम्पनी सुरू गर्दै? यहाँ तपाइँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो! »
पछिल्लो The डच कानूनी क्षेत्रमा अनुपालन